Adeegga Macluumaadka luuqadaha badan ku qoran ee ÖIF
Hadii aad raadinayso macluumaad ku saabsan coronavirus, fadlan la xiriir shaqaalaha ÖIF! waxaad halkaan ka heli kartaa macluumaadka adeegga macluumaadka luuqadaha badan ku qoran.
Tallaabooyinka badbaadada Fayraska korona oo 17 luqadood ah
Websaydka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa oo lagu balaariyay warbixinta cusub.
Miiska macluumaadka: 19ka Abriil 2022
Macluumaadka ku saabsan tallaalka coronavirus
Dhammaan dadka ku nool Austria ayaa ku heli kara tallaal bilaash ah Austria si looga ilaaliyo coronavirus. Isku diiwaangelinta tallaalka coronavirus waa in laga sameeyo bogga intarnetka maamul gobaleedyada ee www.oesterreich-impft.at/jetzt-impfen.
Iyada oo qayb ka ah wada-tashiga onleenka ah “Wada-sheekaysiga Coronavirus: xannibaadyada iyo tallaalada”, ÖIF waxay bixisaa macluumaadka ku saabsan shuruudaha hadda jira iyo sidoo kale tallaalka si looga hortago coronavirus. Dadka aan aqoonta badan u lahayn luuqadda Jarmalka, waa loo turjumi doonaa kulamada wada-tashiga. Ka qaybgalka waa bilaash mana u baahna isdiiwaangelin. Dhammaan taariikhaha waxaa laga heli karaa www.integrationsfonds.at/onlinekurse.
Shaqaalaha ÖIF ayaa lagu heli karaa wicitaanka taleefonka laga bilaabo Isniin ilaa iyo Jimce saacadaha 10:00 – 14:00 iyo sidoo kale Jimcaha laga bilaabo 09:00 – 13:00 lambarka +43 1/715 10 51 – 263 si ay uga jawaabaan dhammaan su’aalahaaga la xiriira coronavirus!
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan coronavirus iyo tallaalka coronavirus ayaa laga heli karaa bogga intarnetka ee Wasaaradda Arrimaha Bulshada ee barta Informationen zur Corona-Schutzimpfung in Österreich (sozialministerium.at) (macluumaadka tallaalka ku saabsan ee Austria, Luuqadda Jarmalka) iyo sidoo kale Coronavirus (sozialministerium.at).
Riix halkaan si aad u hesho talo onleen ah oo ku saabsan dhammaan qeybaha COVID-19.
Tallaabooyinka Kahortagga COVID 19
Tallaabooyinka ayaa shaqeyn doona ilaa 08 Luulyo 2022. Halkaan waxaad ka heli kartaa dulmar; iyo macluumaad dheeraad ah www.oesterreich.gv.at, Coronavirus - Aktuelle Maßnahmen (sozialministerium.at).
Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Gobolada Federaalka →Karte Corona-Ampel | Corona Ampel
Fiiro gaar ah: Xeerarka gaarka ah ee Wien →„Tallaabooyinka Gobolka Wien“
Kuwa la soo baaray
Antigen-ka ee ay sameysay hay’ad idman („Baaritaanka Austria“): 24 Saacadood ayuu shaqaynayaa laga bilaabo qaaditaanka munaadka
Baaritaanka- PCR: 72 Saacadood ayuu shaqaynayaa laga bilaabo qaaditaanka munaadka
Baaritaanka antijenka ee shakhsigu isku isticmaalo ("baaritaanka lagu sameeyo guriga") ee lagu diiwaangeliyo qaab dijital ah ma aha caddayn shaqeynaysa - xitaa laguma oggola goobta shaqada
Waxyaabaha soo socda looma arko inay yihiin caddayn baaritaan:
Ka-dhaafitaanada waajibaadka baaritaanka:
Haddii baaritaanka aan si macquul ah looga filan karin qofka sababo caafimaad dartood ama naafanimo darteed (tusaale ahaan sida xaalada waallida oo kale)
Kuwa ka soo kabsaday
Xaqiijinta Dhakhtarka ee ka soo kabsashada caabuqa: 6 bilood ayay shaqaynaysaa laga bilaabo soo saarista
Ogeysiinta kala go‘a: 6 Bilood ayuu shaqaynayaa laga bilaabo soo saarista
Tallaalka labaad: Waxaa uu ansax ahaanayaa 6 bilood oo loogu talagalay dadka da'doodu ay ka weyn tahay 18 sano jir - waxaa uu ansax ahaanayaa 7 bilood oo loogu talagalay dadka da'doodu ay ka yar tahay 18 sano jir
Bogsooshada (baaritaanka PCR-ga togan ama borotiinka difaaca jirka) iyo hal garooja tallaal: Ansax ahaanaaya mudda 6 bilood
Xoojinta tallaalka (3 tallaal ama soo kabasho iyo 2 tallaal): Shaqeynaya 1 sano
Waajibaadka ah in la soo bandhigo caddeynta 3G ee loogu talagalay carruurta da'doodu tahay 12 iyo wixii ka weyn
Ka-dhaafitaanka in qofka la weydiiyo caddeynta 3G
Dadka aan la tallaali kari, sababo la xiriira arrimaha caafimaadka
→Waa in la soo bandhigaa Baaritaanka-PCR
→Tani ma khusayso haweenka uurka leh, meelaha „2G-Plus“ looga baahan yahay. Lamma ogola soo gelitaanka haweenka uurka leh ee aan tallaalnayn.
Caddayntu waa in ay ku qoran tahay Jarmal ama Ingiriis.
FIIRO GAAR AH: Been abuurka iyo adeegsiga Caddaynta been abuurka ah waa Dambi gudaha Austria. Cawaaqibka suurtagalka ah: Lacag ganaax ah iyo/ama Xabsi
Baaritaanada, keliya waa in lagu sameeyo Teststraßen!
FFP2 - xirashada qasabka ah ee maaskarada
Waa qasab in la xirto maaskaro FFP2 ah marka la joogo meelaha xiran ee aaggaga soo socda:
Gaadiidka dadweynaha, gaadiidka dugsiga iyo tagsiga -safarka oo dhan, saldhigyada iyo meelaha sugitaanka,
Farmashiyeyaasha u furan dadweynaha, xarumaha lagu iibiyo alaabta caafimaadka iyo dukaamada daawooyinka,
Ganacsiga cuntada (ay ku jiraan beeralayda suuqgeyn toos ah), ganacsiga beeraha iyo xarumaha lagu iibiyo quudinta xoolaha,
Xarumaha loogu talagalay dadka naafada ah,
adeegga suuqa shaqada, adeegyada sharciga iyo adeegyada degdegga ah,
Bangiyada iyo laamaha boostada ama bixiyeyaasha adeegga boostada,
Taraafikada iyo xarumaha wargeysyada,
Dukaamada dayactirka baabuurta iyo baaskiilka, kaalimaha shidaalka iyo dhaqidda baabuurta,
Adeegyada nadaafadda iyo nadaafadda,
Dhismooyinka iibinta amniga iyo alaabta degdegga ah,
Hay'adaha maamulka iyo maxkamadaha maamulka ee kiiska isgaarsiinta xisbiyada.
Qalabka loogu talagalay ku dhaqanka diinta.
Hawl-wadeennada iyo shaqaalaha xarumahan waxaa looga baahan doonaa inay xidhaan maaskaro FFP2 marka ay si toos ah ula xiriiraan macaamiisha, ilaa tillaabooyin ilaalin ah mooyee (tusaale darbiyada Plexiglas) aan la samayn
Waxaa intaa dheer, waxaa lagu talinayaa in lagu xidho maaskaro FFP2 qolalka xiran ee xarumaha iyo meelaha kale.
Macluumaadka ku saabsan shruudaha maaskada
Carruurta da'doodu ka yar tahay 6 jir khasab ma aha inay xirtaan maaskaro
Waxaa ka reeban waajibaadka Maaskada- FFP2:
Sababaha gaarka ah ee la xiriira caafimaadka ama naafanimada (kadibna xirashada maaskaro daboosha afka-sanka ama wax kale oo difaac ah oo qofka la eg; haddii aysan macquul ahayn, xijaabka wajiga) xaqiijinta dhakhtarka ayaa loo baahan yahay
Sababaha la xiriira -daaweynta iyo waxbarashada
Marka la bixinayo adeegyada jidhka u dhow (Haddii loo baahdo maasko la‘aan)
Marka la bixinayo ama la isticmaalayo adeegyada caafimaadka ee daaweynta hadalka
Inta wax la cunayo ama la cabayo
Markaad jimicsi samaynayso ama meelaha qoyan (tusaale qubaysyada, barkadaha dabaasha).
Dadka uurka leh (Difaaca-Afka-Sanka waa in la xidhaa)
Dadka dhagoolada ah ama sidoo kale maqalka naafada ka ah marka ay la hadlayaan dadka kale
Ma jiro xeer 3G goobta shaqada, marka laga reebo shaqaalaha ka shaqeeya waaxda caafimaadka → Fiiro gaar ah: Xeerarka qaaska ah ee ka jira Vienna → "Tallaabooyinka ka hortagga cudurka ee ka jira gobolka Vienna"
Maaskarada FFP2 waa qasab
- shaqaalaha caafimaadka
Shaqaalaha macmiilka/gudaha xidhiidh la leh xarumaha ay waji-xidhashadu ku qasban yihiin, ilaa tillaabooyin ilaalin ah (tusaale gidaarada Plexiglas) aan la samaynin.
Shuruudaha adag ee loo shaqeeyaha ayaa lagu soo rogi karaa kiisas xaq ah.
Shaqaalaha (sidoo kale waxay quseysaa daryeelka mobilada iyo taageerada): Ogaanshaha 3G iyo maaskaro FFP2 ee xidhiidhka tooska ah ee dadka deegaanka, marka laga reebo tallaabooyinka ilaalinta (tusaale darbiyada Plexiglas).
Soo-booqdayaasha: Ogaanshaha 3G iyo xirashada maaskaro FFP2 ah inta gudaha lagu jiro
Dadka degan guryaha dadka lagu xanaaneeyo iyo guryaha naafada: 3Ogaanshaha 3G ama taxaddarrada kale ee ururka (tusaale tillaabooyinka karantiilka) ka hor oggolaanshaha cusub,xirashada maaskaro FFP2 ah mar lagu jiro qolalka ka wada dhaxeeyo dadka guud
Bukaanada jooga xarumaha caafimaadka iyo goobaha cibaadada: Maaskarada FFP2
Meelaha kale ee lagu bixiyo adeegyada caafimaadka iyo daryeelka: Dhammaan bukaannada, booqdayaasha, dadka la socda iyo shaqaalaha waxaa looga baahan yahay inay xidhaan waji-xidhka FFP2, ilaa tillaabooyin ilaalin ah (tusaale gidaarada plexiglass) meesha yaal mooyee.
TALLAABOOYINKA ISDHEXGALKA EE LAMA HURAANKA AH EE DEEQDA ISDHEXGALKA AWSTIRIYA (ÖIF):
Ka qaybqaadashadu waxay suurtogal tahay oo keliya marka la helo caddaynta 3G oo la xirto maaskaro FFP2 ah!
Munaasabadaha ay ka soo qeybgalayaan in ka badan 500 qof:
COVID-19 Sameey oo hirgeli fikradda kahortagga cudurka
Magacow sarkaal u qaabilsan COVID-19
Golayaasha sida waafaqsan Xeerka Golaha (sharaxaadyada) - Maaskarada FPP2 waa in sidoo kale lagu xirtaa bannaanada
Shirarka xirfadeed oo aan dib loo dhigi karin
Shirarka hay'adaha siyaasada, xisbiyada sharciga ah ama hay'adaha dastuuriga ah ee shaqada oo aan dib loo dhigi karin
u wadista tiyaatarada, hoolalka ruwaayadaha iyo fagaarayaasha, shineemooyinka, oo wata baabuurta
munaasabadaha lagu qabto guryaha gaarka loo leeyahay
Tallaabooyinka Gobolka ee WIEN
Kuwa soo socdaa waxay khuseeyaan waaxda caafimaadka:
Tijaabada PCR ee xun ee dadka soo booqda guryaha daryeelka iyo daryeelka iyo sidoo kale isbitaalada iyo xarumaha daaweynta
Tani waxay khusaysaa carruurta 6 sano iyo ka weyn
Tani ma khusayso shakhsiyaadka ka bogsaday 15 Janaayo 2022 ka dib, muddo 2 bilood ah ka dib marka uu cudurku dhaco.
Isbitaalada iyo xarumaha daaweynta: Saddex booqde bukaan kasta maalintii ama afar booqdayaal bukaan kasta oo u baahan taageero.
Ogaanshaha 2.5G oo lagu daray 2x imtixaan PCR taban usbuucle ah oo loogu talagalay shaqaalaha guryaha daryeelka iyo daryeelka iyo isbitaallada iyo xarumaha daaweynta
Tijaabada PCR: Shaqeynaya 48 saacadood
Kuwa soo socdaa waxay khuseeyaan machadyada waxbarashada hoose (kindergarten, xarumaha daryeelka ilmaha):
Maaskarada FFP2 waa qasab dadka dibadda ah (tusaale waalidiinta)
Tallaalka qasabka ah ee COVID-19 Tallaalka tan iyo Febraayo 2022
Talaalka khasabka ah macnihiisu waa in dhamaan dadka Austraia ku nool ay waajib ku tahay inay iska tallaalaan cudurka loo yaqaan 'coronavirus' haddii aysan wali istallaalin oo maamulkuna uu sidaas caddeeyo in la sameeyo. Ganaaxyo ayaa qofka la saari karaa haddii ay dhacdo in loo hogaansami waayo.
Qodobadaan soo socda waxay jireen laga bilaabo 5. Febaraayo 2022. Wixii macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa Macluumaadka ku saabsan tallaalka khasabka ah ee ka dhanka ah cudurka korona fayras ee gudaha Austria (sozialministerium.at).
Ansax ah laga bilaabo 5 Febraayo 2022 ilaa 31. Janaayo 2024 - Ganaaxyada waxaa la bilaabi doonaa 16-ka Maarso 2022
Waxay khuseeyaan dhammaan dadka da'doodu tahay 18 ama ka weyn ee ku nool dalka Awstaria.
Arrintaas waxaa ka reeban oo laga dhaafay:
Dadka da'doodu ka yar tahay 18 jir
Dadka aan la tallaali karin sababo caafimaad awgeed
Dadka aan yeelan ama yeeshan tiro antiboodhiyo/unugyada difaaca jirka ah oo aan ku filnayn iyadoo xitaa la siiyey tallaalka (tusaale ahaan, haddii ay dhacdo xasaasiyad ka dhan ah tallaalka cudurka korona fayras)
Dadka ka soo bogsaday caabuqa korona fayras 180-kii maalmood ee la soo dhaafay
Sababaha gaarka ah ee jira, waa inuu xaqiijiyaa Dhakhtar.
Tallaalka khasabka ah waxa uu ka kooban yahay dhammaan tallaallada caabuqa korona fayras ee lagu taliyey; waxayna hadda kala yihiin:
Tallaalka ugu horreeya
Tallaalada la aqoonsan yahay, si loo fuliyo waajibaadka Tallaalka:
2 Tallaalada Shiinaha ka yimid:
3 Tallaalada Hindiya ka yimid:
Serum Institute of India - COVOVAX iyo Covishield
Dadka, kuwaas oo aan helin laba Tallaal oo mid kamid ah Tallaalada kor ku xusan ee dibadda, waxaa Austria dhexdeeda loo arkaa sida dadka halka Tallaal qaatay.
Haddii ay dhacdo in qofka uu qaado caabuqa korona fayras inta u dhaxeeysa qaadashada tallaalada, tallaalka waa in la qaataa ugu dambayn 180 maalmood laga bilaabo xilliga qaadista muunadda (xilliga baaritaanka togan ee PCR).
Haddii shuruudahan aan loo hoggaansamin, ganaax ayaa suurtagal ah (oo ilaa 600 euro ah ama ilaa 3,600 euro ah haddii dacwad lagaa geeyo maxkamadda)
Taariikhaha joojinta waxaa dejiya dowladda federaalka si loo aqoonsado dadka u baahan in laga tallaalo cudurka korona fayras 'coronavirus'.
Dadka aan la go'aamin karin in ay buuxiyeen shuruudaha tallaalka waxaa la soo xiriiri doonaan maamulka.
Dadka waxa la codsanayaa in la tallaalo wakhti go'an oo kama dambays ah ama in sababta ka-dhaafitaanka qaadashada tallaalka uu dhakhtarka geliyo/ku qoro diiwaanka tallaalka.
Haddii codsiga aan loo hoggaansamin inta aan la gaarin wakhtiga kama dambaysta ah, maamulka ayaa ku soo rogi kara ganaax (eeg kor).